ROI (Return On Investment) ဆိုတာဘာလဲ။ ROI နှင့် IT ဘယ်လို ဆက်နွယ်နေလဲ။ ~ ကိုစစ်ကိုင်း၏ မှတ်စုများ
ROI (Return On Investment) ဆိုတာဘာလဲ။ ROI နှင့် IT ဘယ်လို ဆက်နွယ်နေလဲ။
Ko Sagaing Tuesday, February 28, 2017 Business နှင့် IT
ROI ဆိုတာဘာလဲ။ IT (သို့) IS နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူဖြစ်လဲ။ စသည့်မေးခွန်းမျိုးတွေကို ယခင်ကထက်၊ ယနေ့အချိန်မှာ IT နယ်ပယ်ကလူတွေကို ပိုပြီးမေးခံရလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲဖြေရမယ့် အဖြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် Accounting နှင့် Finance မှာဖေါ်ပြလေ့ရှိတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရဆိုရင်...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ အသားတင်ဝင်ငွေ အတိုင်းတာဆိုတာ ၄င်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကနေ ဝင်လာသမျှ အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်ပြီး၊ ROI ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ အခွန်အခတွေပေးပြီးနောက် ရလာတဲ့ အသားတင်အမြတ်ငွေကို ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းနှင့်စားခြင်းဖြင့် တွက်ချက်ကြပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံပြီးသတ်မှတ်ပြောဆိုမှပဲ လက်ခံနိုင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ IT Project တစ်ခုတည်း (သို့) Project တစ်ခုအောက်မှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် မတူခြားနားတဲ့ အမျိုးမျိုးသော IT Solutions တွေအတွက် လက်တွေ့ကျကျပြောဆိုဖို့အတွက်ကတော့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ROI အကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာ၊ သူတို့အမှန်တယ် မေးခွန်းမေးတာက...
ငါဒါကိုသုံးစွဲဖို့ (ရင်းနှီးမြှုတ်နှံဖို့) အတွက် မေးခွန်းထုတ်ခံရမှာလား။
တကယ့် တန်ကြေးက ဘယ်အရာတွေလဲ။
စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များ - ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေသိနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်ရနိုင်တဲ့အရာများ
အစဉ်အလာအရကတော့ ထိပ်ပိုင်းကစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေနှင့် IT နည်းပညာရှင်တွေဟာ ITနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတွေအတွက် ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွေကိုပဲ အဓိကထားပြီး အများအားဖြင့် စဉ်းစားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ စီးပွားရေးဦးဆောင်သူတွေနှင့် နည်းပညာရှင်တွေဟာ IT နှင့်ပတ်သက်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတွေကနေ ငွေကြေးကဲ့သို့မဟုတ်တဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကိုလည်းပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာခဲ့ကြတယ်။
ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်း၏ ဝင်ငွေထွက်ငွေနှင့် ဘဏ္ဏာငွေတို့အပေါ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ သက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်း (သို့) အခွန်ဘဏ္ဏာများ တိုးပွားလာခြင်း စသည်တို့ဖြစ်တယ်။
ငွေကြေးမဟုတ်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ရလဒ်တွေနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတို့အပေါ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ သက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ဖောက်သည်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု တိုးမြှင့်လာခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ဆောင်ရွက်မှုအချိန် တိုတောင်းသွားခြင်း စသည်တို့ဖြစ်တယ်။
IT ၏ တန်ဖိုး
ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေဟာ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမယ့်တန်ဖိုးကို လေ့လာမှုပြုလုပ်ပြီး၊ ၄င်းပေါ်မှာအခြေခံကာ IT Project တွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေကို လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ IT ၏တန်ဖိုးကို အဖွဲ့အစည်းက ဘာတွေပေးလိုက်ရပြီး၊ ဘာတွေပြန်ရမှာလဲ ဆိုတဲ့ကြားထဲကဆက်နွယ်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ IT Project တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုရင် ၄င်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဆက်နွယ်နေပြီးတော့ အကျိုးအမြတ်ပမာဏလည်း ပိုပြီးကြီးမားမှာ ဖြစ်တယ်။
လက်တွေ့မှာ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများဟာ “financial metrics” ကို တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီး အသုံးပြုကြတယ်။ ၄င်းတို့ဟာ တစ်ခုချင်း (သို့) စုပေါင်းလျှက် ROI အနေနှင့်ရည်ညွှန်းတယ်။ အဲ့ဒီ metrics တွေမှာ ပါဝင်တာတွေက...
Payback Period (ပြန်လည်ရရှိမယ့် ကာလအပိုင်းအခြား)
Project ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်လည်ရရှိပြီးနောက် အကျိုးအမြတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အချိန်ပမာဏ
Net Present Value (လက်ရှိ အသားတင်တန်ဖိုး)
ယခုလက်ရှိငွေကြေးအရ အနာဂတ်အကျိုးအမြတ်တန်ဖိုးကို ပြန်ဆင်သတ်မှတ်ချက်
Internal Rate of Return (မြှုတ်နှံမှုမှပြန်ရနိုင်မယ့် နှုန်းထား)
အတိုးနှုန်းထားတစ်ခုလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ရင် ရနိုင်မယ့်အကျိုးအမြတ်များ
$1,500 ကုန်ကျမယ့် Project တစ်ခုကို သင်လုပ်ရမယ်ဆိုကြပါစို့၊ အဲ့ဒီ Project ဟာ ၅နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုရင် တစ်နှစ်ကို $1,000 သင်သက်သာလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီ Project ရဲ့ ROI ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ ဆိုကြပါစို့ ဒီ Project အတွက် 10% ကုန်ကျတယ်လို့ ယူဆကြည့်မယ်ဆိုရင်...အဖြေကို အောက်ဖေါ်ပြပါပုံမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
Payback Period. အခြေခံပြန်ရမယ့် ကာလအပိုင်းအခြားက တစ်နှစ်ခွဲ
NPV. အကျိုးအမြတ်ရမယ့်တန်ဖိုးက $2,291
IRR. မြှုတ်နှံမှုမှ ပြန်လည်ရနိုင်မယ့် အတိုးနှုန်းထား ပမာဏက 60.38%.
လက်မထောင်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်ပုံလေးတွေညွှန်းဆိုသကဲ့သို့ ဘဏ္ဏာရေးရှုထောင့်တစ်နေရာကနေ ထည့်သွင်းတွက်စဉ်းစားရင်လည်း ထိုက်သင့်တဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို metrics တွေကို စာအုပ်ထဲမှာလက်နှင့်ချပြီး ဂဏန်းပေါင်းစက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အလိုလျှောက်တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ Software ကို အသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ အထက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ပုံဟာ RMS ၏ အလိုလျှောက်တွက်ချက်ပေးတဲ့ Software FAST ROI for IT Quick Version မှ ကူးယူဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြလို့ မရနိုင်တဲ့အရာတွေ၊ Software ထဲကအရာတွေ၊ တိုင်းတာလို့မရတာတွေ စတာတွေကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စကားလုံးတွေကို သုံးစွဲရန်မသင့်ပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာတော့ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
ဘဏ္ဏာရေးအရ ပြန်လည်ရရှိတာမျိုးနှင့်မတူတာကြောင့် ၄င်းတို့ကိုလက်တွေ့မှာတော့ အသုံးချနိုင်ပေမယ့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ metrics မျိုးတွေတော့မရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုမှာ IT ရဲ့ စွမ်းပကားကြောင့် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုရလဒ်တွေပေါ်မှာ အပေါင်းလက္ခဏာပြတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကတော့ မငြင်းပယ်နိုင်ပါဘူး။ အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ နှစ်ခွဖြစ်နေကြ အကျပ်အတည်းကတော့ သူတို့ဟာ ဘာကိုတိုင်းတာရမလဲဆိုတာ သေချာမသိခြင်းနှင့် သူတို့ ဘယ်လိုတိုင်းတာရမလဲဆိုတာ မသိခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။
FAQ IT Budgeting ကို ဆီလျှော်အာင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ဝီကီပီးဒီးယား Return of Investment
Investinganswers မှ Return of Investment
Investopedia မှ Return of Investment